I-Shalom Cottage (panorama ukuya eLake Balaton)
Leli khaya elinobungani, elinezitezi ezimbili elisegqumeni eduze kwehlathi, elinepanorama ebabazekayo echibini laseLake Balaton. Kusepaki kazwelonke evikelwe kakhulu, amakhilomitha ayi-8 (10 imizuzu yokushayela) ukusuka e-Balatonfüred. Lesi sifunda esizolile siyindawo enhle yokuvakasha, futhi ungaphumuza ogwini lweLake Balaton. Ilungele imindeni enezingane kanye nawo wonke umuntu othanda ukuphumula ngokukhuthala ngokwemvelo. Uhlelo lwamanzi ashisayo afudumele lunikeza amanzi emvula, kanti amanzi aphuzwayo anikezwa njengamabhodlela.
Amakhilomitha ayi-8 ukusuka enhlokodolobha yeLake Balaton, endaweni ethule, neyothando e-Balaton Uplands National Park, le ndlu yomndeni enezitezi ezimbili, enobungani itholakala endaweni eyi-5,500-square-metres. Amafasitela anikeza i-panorama enhle yeLake Balaton kanye neNhlonhlo yaseTihany. Indawo yokudlela ephethwe umndeni iqhele ngamamitha angu-300 futhi inikeza izinambitheka zasekhaya kanye namawayini aphambili endaweni. Indlu ihlinzekwa ngamanzi ashisayo nabandayo anamanzi emvula (afanele ukugeza izandla, ukugeza nokugeza izitsha), kuyilapho amanzi asebhodleleni ekhona okuphuza. Indlu inefriji, ihobhu, ihhavini futhi, esimweni sezulu esipholile, kune-heater kagesi.
4.90(31 okushiwo abanye)
Kukhona indawo yokudlela ekhangayo phakathi kwezivini, eyi-300m ukusuka endlini, enikeza okuthandwa kwasendaweni kanye nemivini yendawo.
Esifundeni seLake Balaton, kunezindawo eziningi ezibukwayo, isb., izinkambu zamanzi ashisayo e-Tihany kanye neZoo e-Veszprém.
Sihlala sithintana ngocingo, umlayezo wombhalo kanye ne-e-mail.